ဘဝတဈလြှောကျလုံး ပလကျစတဈပုံးထဲမှာ နထေိုငျနရေတဲ့ မိနျးကလေး – Myanmar
ဘဝတဈလြှောကျလုံး ပလကျစတဈပုံးထဲမှာ နထေိုငျနရေတဲ့ မိနျးကလေး
September 5, 2020 admin Life Style, Weird, Wonder 0
နိုငျဂြီးရီးယားနိုငျငံက မိနျးကလေးတဈဦးဟာ ခန်တာကိုယျဖှံဖွိုးပုံ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ ရောဂါဆနျးတဈမြိုးကွောငျ့ သူမရဲ. ဘဝတဈလြှောကျလုံးနီးပါးကို ပလကျစတဈပုံးထဲမှာသာ နထေိုငျပွီး ဖွတျသနျးခဲ့ရပါတယျ။
သူမဟာ မှေးဖှားကာစက အခွားသော ကလေးငယျတှလေိုပဲ ကနျြးကနျြးမာမာ ဖွဈပမေယျ့ ခွောကျလအရှယျမှာ လကျရှိသူမခံစားနရေတဲ့ ရောဂါစတငျဖွဈလာပါတယျ ။ သူမရဲ. ခန်တာကိုယျအောကျပိုငျးနဲ့ လကျတှဟော လကျဆကျဖှံဖွိုးခွငျး မရှိတော့ပဲ ဒီအတိုငျးသာ ဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။
လကျရှိမှာ သူမဟာ အသကျ 23 နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈကာ သူမရဲ. အခွအေနဟော လေးဖကျထောကျသှားနိုငျတဲ့ အခွအေနမှောတောငျ မရှိပါဘူး ။ ဒါကွောငျ့ သူမကို ပလကျစတဈပုံးထဲ ထညျ့ပွီး သူမရဲ.မိသားစုဝငျတှကေ ချေါသှားရလေ့ ရှိပွီး ရမြေိုးခြိုးတာ အစားအစာ စားတာတှကေို မှေးခငျြးမောငျနှမတှကေ ကူညီပွုလုပျပေးရပါတယျ။
သူမဟာ အခွားသော သာမနျမိနျးကလေးတှလေိုပဲ ပြျောပြျောနခေငျြသူ ဉာဏျကောငျး ထကျမွတျတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျပါ ။ သူမကို မိသားစုက ကုသမှုတှေ ပွုလုပျပေးခဲ့ပမေယျ့လညျး ဘယျလိုမှ မပြောကျကငျးခဲ့ပါဘူး ။ သူမက ဖွဈနိုငျမယျဆိုရငျ ကိုယျပိုငျစတိုးဆိုငျလေးတဈခု ပိုငျဆိုငျခငျြတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ပလက်စတစ်ပုံးထဲမှာ နေထိုင်နေရတဲ့ မိန်းကလေး
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံက မိန်းကလေးတစ်ဦးဟာ ခန္တာကိုယ်ဖွံဖြိုးပုံ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ရောဂါဆန်းတစ်မျိုးကြောင့် သူမရဲ. ဘဝတစ်လျှောက်လုံးနီးပါးကို ပလက်စတစ်ပုံးထဲမှာသာ နေထိုင်ပြီး ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။
သူမဟာ မွေးဖွားကာစက အခြားသော ကလေးငယ်တွေလိုပဲ ကျန်းကျန်းမာမာ ဖြစ်ပေမယ့် ခြောက်လအရွယ်မှာ လက်ရှိသူမခံစားနေရတဲ့ ရောဂါစတင်ဖြစ်လာပါတယ် ။ သူမရဲ. ခန္တာကိုယ်အောက်ပိုင်းနဲ့ လက်တွေဟာ လက်ဆက်ဖွံဖြိုးခြင်း မရှိတော့ပဲ ဒီအတိုင်းသာ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ သူမဟာ အသက် 23 နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ကာ သူမရဲ. အခြေအနေဟာ လေးဖက်ထောက်သွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာတောင် မရှိပါဘူး ။ ဒါကြောင့် သူမကို ပလက်စတစ်ပုံးထဲ ထည့်ပြီး သူမရဲ.မိသားစုဝင်တွေက ခေါ်သွားရလေ့ ရှိပြီး ရေမျိုးချိုးတာ အစားအစာ စားတာတွေကို မွေးချင်းမောင်နှမတွေက ကူညီပြုလုပ်ပေးရပါတယ်။
သူမဟာ အခြားသော သာမန်မိန်းကလေးတွေလိုပဲ ပျော်ပျော်နေချင်သူ ဉာဏ်ကောင်း ထက်မြတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ ။ သူမကို မိသားစုက ကုသမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပေမယ့်လည်း ဘယ်လိုမှ မပျောက်ကင်းခဲ့ပါဘူး ။ သူမက ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်စတိုးဆိုင်လေးတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအခြိနျမှာ စြေးဘယျလောကျ ပေါပေါ ကားတှေ အိမျခွံမွတှေေ လုံးဝ မဝယျသငျ့တဲ့ အကွောငျး
ဒီလို လူမြိုးတှနေဲ့ လုံးဝ ခရီးအတူမသှားသငျ့ပါဘူးနျော